Tenga Mibolerone powder (3704-9-4) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Anabolics Steroids / Trenbolone powder Series / Mibolerone powder (3704-9-4)
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweMibolerone powder (3704-9-4), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano hwehutano.
Color: Muchena kana Mucheka mutsvuku
Kemikari Mazita: dimethylnortestosterone, Mibolerone powder
Mamwe Mazita: Chengeta madonhwe, Matenon, Mibolerone powder, Chengeta Madonpa powder, CDB-904, 3704-9-4
Chinangwa che steroid iyi ndechekuvhiringidza kunonoka kwemwedzi yeja imbwa kuitira kuti tidzivirire pamuviri. Sezvakaita mahomoni akawanda e steroid, uye izvi zvinosanganisira gorosi rezviremba, hazvina nguva refu mushure mokutanga kwaro kuti vatambi uye vashandi vemuviri vakawana kushandiswa.
Tarisa Dhepasi ndeimwe yemafuta anebolic steroid yakaitwa kare. Icho ndechimwe chezvinhu zvakanyanya kuoma steroid zvakamboitwa maererano nemigumisiro yemigumisiro. Iyi haisi steroid inowanzoshandiswa nevanice bodybuilders kana vatambi. Iwe unowanzowanzoshandisa kushandiswa kwaro kunongopedzisira kupikisana kana kuti powerlifting makwikwi. Vamwe vashandi vemuviri vauchishandisa iyo isati yakwikwidza kuti vabatsire mumavhiki ekupedzisira kana munguva yekunze-yekusundidzira kwekuwedzera, asi haisi iyo yakajairika yekuvaka muviri steroid. Tichazonzwisisa kusakosha kwechirotero chechikwereti kune vakawanda vanovaka muviri sezvatinopfuurira.
Chii chinonzi Mibolerone powder
Vatambi vakawanda vanoshandisa nezve 5mgs pamusoro pe30min vasati vadzidziswa kana kukwikwidzana. Haisi "kuiswa" chero chinhu kunze kwekakarari. Inowanzoshandiswa nguva isati yasvika pane zvidzidzo zvakakosha kana makwikwi. Vatambi vakawanda vatove vachishandisa masero anorema e-steroid vanowedzera mucheka matonho sechiitiko chekutanga.
Tarisa Matoro anotorwa nemuromo uye anofanira kutorwa zuva nezuva. Diso kazhinji inowira mu 200-300mcg zuva rega asi inogona kuwedzera kusvika ku 500mcg pazuva pane dzimwe nguva. Maitiro anogara achitorwa vasati vadzidziswa, anenge 30-40 maminitsi vasati vadzidziswa, kurwa kana chiitiko. Hapana maitiro ekurapa anokurudzirwa sezvo steroid iyi isati yamboshandiswa mishonga nokuda kwevanhu.
Iyo Mibolerone powder inoshanda sei
Tarisa madonhwe inogadziriswa mvura ye steroid Mibolerone powder (CAS 3704-9-4), iyo inoshandiswa nevadziviriri vemagetsi, vapambi vemasimba, vatambi vane simba uye varwi, zvose nokuda kwekuwedzera kukuvadza uye kushanda pazuva rekukwikwidza. Tarisa madonhwe anoshanda kana achishandiswa mamiriyoni 30 musati makwikwi. Mushandisi achaona kukura kwechisimba, kutarisa uye kukwikwidzana motokari. Kunyange zvazvo steroid iyi isingabatanidzi zvakananga, inoratidza chiito chinonyatsooneka pane CNS (Central Nervous System) kuburikidza nemhando ye androgen inowedzera. Ichi ndicho chikonzero chikonzero ichi chinodhaka chinoshandiswa nevatambi, sezvo maronda anowanikwa asingazivikanwi nemudhaka uyu.
Hapana humwe humwe uchapupu huripo hune hutano kana kuti zvimwe vatambi vari kushandisa Vanotarisa madonhwe mu "kutenderera" sezvinojairika nedzimwe steroid. Zvinoratidzika kuti steroid iyi yakasimbisa zvakasimba kudai steroid isati yaitika yekusarudza kuwedzera kukuvadza uye kukwikwidzana motokari. Zvisinei, hapana huwandu hwakawanda huri mumasisita mashoma hunogona kuwanikwa pamushonga uyu nemhaka yekuti inogona kungoshandiswa munguva shomanana ye2 yevhiki, mudiki 5mg doses. Pane imwe nguva nguva iyo, kana kuti chirwere chakanyanya kukura, uye zvinetso zveutano zviri pedyo.
Nyaya inokosha: Kutadza kwepanyama kunotora kuti hakuna chakaipa chakaitwa kuHypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis uye kuti haisi yepamusoro yepamusoro mamiriro ezvinhu akavepo.
· Hepatotoxicity: Kufanana neC17-aa anabolic steroids Tarisa Dhepa inotyisa kune chiropa. Mutengo uye kukosha kwehutu hunobva kune imwe C17-aa steroid kune inotevera inopesana zvikuru; zvimwe zvinotyisa asi zvinyoro zvakadaro, asi izvi hazvisi unyoro. Tarisa Dhepasi inogona kuva neimwe yezvinonyanya kusimba, zvisingaiti paine enzyme yeropa yezvose C17-aa steroids. Chiropa maitiro achawedzera zvinoshamisa uye zvinetso zvakawanda zvichaiswa pachiropa.
Kana uine chirwere chechiropa haufaniri kushandisa steroid iyi. Kushandisa kunofanirawo kuchengetwa kwemasvondo e2-3 chete uye haufaniri kushandiswa chero imwe imwe C17-aa steroid. Pamusoro pemishonga inopikisa inofanirawo kudzivirirwa kana zvichibvira sezvo vazhinji vanewo chiropa chekuvadza uye izvi zvinongokonzera kuwedzera kwechiropa. Zvakakoshawo kuti mushandisi arege kunwa doro panguva yekushandiswa uye kuwedzera pamwe nekuchenesa kweropa. Kusakwanisa kuita zvinhu izvi kunogona kukonzera zvinetso zveropa, uye mune vamwe vashandi kunetseka kungave kwakanaka kunyange kana uchiita zvose zvakanaka.
Iko Mibolerone powder Iva Nezvimwe Zvikamu Zvimwe
Mimwe migumisiro yeAll Drops yakawanda. Ichi ndechimwe chezvinhu zvinotyisa vanabolic steroid yakamboitwa. Nemhaka yemigumisiro yeAll Drops yakasimba iyi haisi steroid chero munhu anofanirwa kushandisa. Kune dzimwe nzira dzakasiyana-siyana dziri nani. Kuwedzera kwechisimba kunotaura musati mhirizhonga inogona kunge iri kuedza, asi njodzi inowanzopfuurira mubayiro pamwe nesteroid ino. Izvi hazvirevi kuti munhu wacho achafa, uye zvinokwanisika nemigumisiro yeHondic Drops kudzivirirwa kusvika kune imwe (haigoni kudziviswa zvachose).
· Estrogenic: Estrogenic nemigumisiro kana Check Drops inobvira zvikuru sezvo steroid iyi inonzi progestin uye inonyanya kuchenesa. Iyo migumisiro yeHondic Drops inogona kusanganisira gynecomastia, kuchengetwa kwemvura uye kukwirira kweropa kunobatanidza nekuchengeterwa kwemvura kwakanyanya. Zvisinei, nokuti kushandiswa kunowanzoita nguva pfupi uye maridhi anoshandiswa ari pasi (zvinotora zvishoma zvishoma Mibolerone powder kuwedzera utsinye) isrogenic tsvina hazviwanzoonekwi.
Kushandiswa kweAromatase Inhibitors (AI) kufanana neAnastrozole (Arimidex) inogona kudzivirira pamagumisiro eesrogenic eHon Drops. Izvi zvichapa kudzivirirwa kubva kune estrogen uye progesterone yakabatana. Zvisinei, basa reestrogenic rakasimba kwazvo zvinoita kuti zvinetso zvichiripo kune vamwe varume.
· Androgenic: The androgenic side effects of Check Drops inogona kusanganisira mazinya, kukura kwemvere dzemuviri uye kurasikirwa kwevhudzi muvarume vakagadzirirwa kumurume. The androgenic side effects of Check Drops inogonawo kusanganisira zviratidzo zvevakadzi; Ichokwadi, virilization pane imwe nhanho inenge yakanyatsosimbiswa.
Nokuti murume anoshandisa genetics achaona kuoma kwea androgenic madhara. Zvakakoshawo kuziva kuti hormone's androgenicity haigoni kuderedzwa nekushandiswa kwe5-alpha reductase inhibitor seFinestone; havazoshandisi.
· Mwoyo: Matambudziko anotevera Check Drops anogona kusanganisira avo vane chirwere chakakomba nemwoyo. Iyi steroid inogona kuva yakaoma kwazvo necholesterol uye ropa. Inogona kuva nehuwandu hweHDL cholesterol (cholesterol yakanaka) uye LDL cholesterol (yakaipa cholesterol). Kana munhu wacho ane chero huri mamiriro ezvinhu emwoyo, akapfuura kana aripo, haafaniri kushandisa steroid iyi.
Vaya vanoshandisa steroid iyi vanoda kuve nechokwadi kuti vari kurarama hupenyu hwemwoyo hwemagariro. Zvokudya zvine utano zvakakosha mu omega mafuta acids uye zvakaderera mumafuta akazara uye shuga shoma zvakakosha zvikuru. Nguva dzose basa rezvemwoyo inobatsirawo, zvakanyanya kudai kana risingagoni kuva chikamu chekuita steroid iyi haisi yako. Vashandi vanofanirwawo kuwedzera necholesterol antioxidant uye kuchengeta ziso rakanyatsoona nezvehutano hwemwoyo yavo.
· Testosterone: Chengeta Manyoka achadzivirira maitiro ako echokwadi e testosterone uye achaita zvakanyanya. Kushandiswa kwe testosterone yakajeka kunokosha kana pasi chetestrosterone ichifanira kudziviswa. Kunyangwe kushandiswa kunowanzopfupi kupedzisira kune steroid iyi, nguva yekushandiswa haizodziviriri kupesana kwe testosterone kunokonzerwa ne-steroid uyewo hazvizovi iyo genetic.
Kamwe kushandiswa kweSteroid iyi kwapera uye steroid yose yakagadzirisa urongwa, hutachiona hwe testosterone hunotanga zvakare. Zvisinei, Post Cycle Therapy (PCT) inokurudzirwa. Izvi zvichavandudza kupora; hazvizovimbisi uye hazvizoipedzisi, asi zvichavandudza maitiro ehutano hwakanaka. Sezvo nezvose steroid, kune nguva dzose njodzi yekuzorora zvakare, uye izvi zvinofanira kufungwa mberi kushandiswa kusati kwatanga.
Nzira yekutenga Mibolerone powder kubva kuAASraw
Mibolerone powder Recipes: